उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम… – Jagaran Nepal
उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम…
हामीले भएको विवरण सबै जस्ताको तस्तै दिएका छौं । अ’परा’ध गरेको घटना लुकाउन डर नै छैन । म किन सडकमा आएँ ? म सडकमा आउन बा’ध्य पारिनुपछाडिका कारण के छन् ? यस्ता विषयमा अध्ययन गरी हामीलाई परिवार र समाजमै पुनःस्थापना गर्ने हो भने अ’परा’धमु’क्त र मानवमुक्त सडक बनाउने अभियान सफल होला कि ? जनआस्था बाट साभार